मलेसियाको इनिङ धरापमा, पारसले लिए विकेट ! [अपडेट] - Everest Dainik - News from Nepal
मलेसियाको इनिङ धरापमा, पारसले लिए विकेट ! [अपडेट]
काठमाडौं, असोज २० । मलेसियामा भइरहेको आइसिसी विश्व टी-ट्वान्टी क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनोट समूह ‘बी’ मा नेपालले आज घरेलु टोलीसँग खेलिरहेको छ । पहिलो खेलमा म्यानमारलाई ८ विकेटले हराएको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा शनिबार मलेसियासँग खेलिरहेको हो ।
मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित वायुमास ओभलमा नेपाल र मलेसियाबीचको खेल नेपाली समय अनुसार बिहान ७ः४५ बजेबाट सुरु भएको छ । यसैबीच, सन्दिप लामिछानेले ५ विकेट लिएका छन् । यस्तै, आठौं विकेट सन्दिपले नै लिएका छन् । योसँगै सन्दिपको खातामा आज ५ विकेट दर्ता भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस रंगशाला निर्माणकाे सहयोगार्थका लागि ‘मातृभूमि कप’ हुँदै, पारस र ज्ञानेन्द्रको टिम भिड्ने
सन्दिपले बिस्फोटाक ब्याट्म्यान मोहम्मद सरफिलाई ४९ रनमा आउट गरेका छन् । सातौं विकेटका रुपमा पारस खड्काको बलमा मलेसियाका खेलाडी रन आउट भएका छन् । यसअघि सोमपाल कामीले लगातार २ विकेट लिएका थिए ।
यस्तै, मलेसियाले ९ विकेट गुमाएको छ । नवौ विकेटका रुपमा पारसले मलेसियाका खेलाडीलाई आउट गरेका छन् । आज कप्तान खड्काले मेडन ओभरसमेत दिएका छन् । साथै, उनले एउटालाइरु रन आउट र एक विकेट लिन सफल भएका छन् ।
तेस्रो र चौंथो विकेट कामीले लिएका हुन् । उनले आफ्नो दोस्रो ओभरको पहिलो र दोस्रो बलमै २ विकेट लिन सफल भए । आज मलेसियाले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाललाई चौथो झड्का, पारस पनि सस्तैमा आउट